နယ်ခြားစောင့် တပ်များနှင့် ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ စုပေါင်း၍ ရွှေဂွန?? - Yangon Media Group
နယ်ခြားစောင့် တပ်များနှင့် ထိုင်းရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ စုပေါင်း၍ ရွှေဂွန??
မြဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ စုပေါင်း၍ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့ မြို့နယ် ရွှေဂွန်းနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများရှိ ရေဘေးသင့် အိမ်ထောင်စု ၁၃ဝဝ ထံသို့ စားရေရိက္ခာများ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်က သွားရောက်လှူဒါန်း ကြောင်းသိရသည်။
ယနေ့ လှူဒါန်းမှုတွင် မြဝတီ မြို့မှ စေတနာရှင်များ၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးမှ စေတနာရှင်များနှင့် ရွှေပညာပါရမီဒါနဆရာတော်တို့ကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား တွေက အားလုံးစုပေါင်းပြီး ကရင် ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည် သူတွေထံ စားရေရိက္ခာကို လှူ ပေးဖို့ AAC အဖွဲ့က ဆက်သွယ်လာတဲ့အတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း တွေ ထိုင်းကနေတစ်ဆင့် မြဝတီကို ရောက်ရှိလာအောင် နယ်ခြား စောင့်တပ်နယ်(၃)က တာဝန်ရှိသူနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းတွေကို ခြောက်ဘီးကားကြီး နဲ့တင်ပြီး သွားလှူမှာပါ။ ဇူလိုင် ၂၈ ရက်ကလည်း ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ဖိုးခန့်ကို ပထမအကြိမ်အဖြစ် သွား ရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်”ဟု လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုအောင်ဝင်းလှိုင်(ခေါ်) အညာ သားက ပြောကြားသည်။
အိမ်ထောင်စု ၁၃ဝဝ အတွက် သွားရောက်လှူဒါန်းသည့် စား သောက်စရာရိက္ခာများမှာ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ငါးသေတ္တာ၊ မားမား ခေါက်ဆွဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊ အာလူးနှင့် ဓာတ်ဆားထုပ်များ လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ပြီး ကာလတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း ၁၄ဝ ခန့်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အလားတူ ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်တပ်များကလည်း ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်က ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် ဒေါ်လန်း ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဒေါ်လန်းကျေး ရွာအပါအဝင် ကော့ဖလန်၊ နတ် ကျွန်း၊ ကျိုက်ပေါင်ကျေးရွာများရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား ဆန် အိတ် ၂ဝဝ၊ ဆီ ၁ဝ ပိဿာဝင်ပုံး ၃ဝ၊ အာလူး ၃၅ အိတ်၊ ကြက်သွန် နီ ၁ဝ အိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၂ အိတ်၊ ပဲငါးပိ ၃ဝ ပိဿာ၊ ရေသန့်ဘူးကြီး ကတ် ၅ဝဝ၊ ဟင်းချိုမှုန့်အိတ်ကြီး တစ်အိတ်၊ မုန့်မျိုးစုံဖာကြီး ၃ဝ၊ မာ မားခေါက်ဆွဲဖာကြီး ၃ဝ၊ စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုး ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ ကျော်ဖိုး လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တီးတိန်မြို့တွင် မိုး ရက်ဆက် ရွာသွန်းမှုနှင့် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် တောင်ယာပြောင်းခင်း
ဘီးလင်းမြို့တွင် ရေကြီးရေလျှံ၍ ကားလမ်းများ ပိတ်ထားခဲ့ရသောကြောင့် မြဝတီတွင် ကွမ်းရွက်ဈေး
ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာ ပါလီမန်များ ညီလာခံ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့၏ ပြတ်သာ??
မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်မျက် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အလုပ်အမှုဆောင်၊ ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချ??
ရေနံချောင်းမြို့နယ် တောင်သူများအား မိုးရာသီ ဘဏ်ချေးငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ၄၄ဝဝဝ ကျော် ထုတ်ခေ
“The Little Mermaid ” ရုပ်ရှင်အတွက် အဆိုးမြင်ဝေဖန်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုထားတဲ့ ဟယ်လီဘိုင်လီ